Psoriatic Arthritis (Psoriasis ကြောင့်အဆစ်ရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Psoriatic Arthritis (Psoriasis ကြောင့်အဆစ်ရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းဆိုတာ Psoriasis ရောဂါရှိတဲ့လူတွေမှာ ဖြစ်တတ်သော အဆစ်ရောင်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Psoriasisဆိုတာဟာ အနီရောင်အကွက်တွေ၊ ငွေရောင်အကြေးခွံတွေဖြစ်စေသော အရေပြားရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုကတော့ Psoriasis အရေပြားရောဂါအရင်စဖြစ်တတ်ပြီး အဆစ်ရောင်ခြင်းက နောက်ကနေလိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ အရေပြားလက္ခဏာမပေါ်ပဲ အဆစ်ရောင်ခြင်းတွေ စတင်တတ်ပါတယ်။
Psoriatic Arthritis (Psoriasis ကြောင့်အဆစ်ရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အမျိုးသား Psoriasis အဖွဲ့အစည်း(NPF)ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အမေရိကန်လူမျိုး ၂ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာ Psoriasis ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ Psoriasis ဖြစ်နေတဲ့သူတွေထဲမှ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းကြားလောက်ဟာ အဆစ်ရောင်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အန္တရယ်ရှိအချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Psoriatic Arthritis (Psoriasis ကြောင့်အဆစ်ရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Psoriasis အဆစ်ရောင်ရောဂါဆိုတာဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုဆိုးလာတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုးဆိုးလာလိုက် သက်သာသွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်လည်းရှိတတ်ပါတယ်။
ခန္ဓါကိုယ်တစ်ဖက်တစ်ချက်ထဲမှာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ နှစ်ဖက်လုံးမှာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ များသောအားဖြင့် လေးဖက်နာရောဂါနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ထိုရောဂါနှစ်ခုလုံးရှိ အဆစ်တွေမှာ ပူ၊နီ၊နာ၊ရောင် လက္ခဏာတွေရှိနေပါတယ်။
Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းဟာ အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
လက်ချောင်း၊ခြေချောင်းတွေဟာ ရောင်ရမ်းပြီး ဝက်အူချောင်းပုံစံဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ အဆစ်ပြဿနာတွေ မပြခင်မှာပဲ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေ၊ ပုံစံပျက်ခြင်းတွေ အရင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။
နာကျင်ခြင်းဟာ အကြောတွေ၊အရွတ်တွေ အရိုးကို တွယ်ဆက်ထားတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခြေဖနောက်ရှိ အာခိလိအရွတ်နဲ့ ခြေဖဝါးရှိ အရွတ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အချို့လူတွေမှာ Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းကြောင့်ပဲ Spondylitis လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးရရှိလာပါတယ်။ ထိုရောဂါကတော့ ကျောရိုးကြားထဲမှာရှိတဲ့ အဆစ်တွေ၊ ကျောရိုးနဲ့တင်ပဆုံရိုးကြားမှာရှိတဲ့ အဆစ်တွေရောင်ရမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုရောဂါဟာ မြန်မြန်သိ၊မြန်မြန်ကုသရင် ပိုမဆိုးလာနိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးထားနိုင်ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုလည်း တားဆီးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော လက္ခဏာတွေရှိနေမယ် ဒါမှမဟုတ် သိလိုတာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာကအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Psoriatic Arthritis (Psoriasis ကြောင့်အဆစ်ရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဘာတွေကြောင့် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း မျိုးရိုးလိုက်တာကြောင့်လို့ ယူဆရပါတယ်။ Psoriasisအဆစ်ရောင်ရောဂါရှိတဲ့သူ ၄၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာ အဆစ်နဲ့အရေပြားပြဿနာတွေရှိတဲ့ မိသားစုဝင်ရှိနေတယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
Psoriasis ရှိတဲ့သူ ၃ပုံ၁ပုံလောက်ဟာ အဆစ်ရောင်နိုင်ပါတယ်။ Psoriasis ဆိုတာဟာ တံတောင်ဆစ်၊ ဒူး၊ ခြေကျင်းဝတ်၊ ခြေဖဝါးနဲ့ လက်တို့မှာ အနီရောင်အကွက်နဲ့ ငွေရောင်အကြေးခွံတွေ ဖြစ်နေသော အရေပြားရောဂါပါ။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ဟာ အပြင်ကဝင်ရောက်လာတဲ့ အရာတွေကို တိုက်ရမယ့်အစား ခန္ဓါကိုယ်ကို ပြန်တိုက်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းဟာ အသက်၃၀နဲ့ ၅၀ကြားမှာ စပေါ်နိုင်သော်လည်း ကလေးဘဝမှာကတည်းလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းမဟုတ်သော်လည်း တော်တော်များများက အရေပြားရောဂါအရင်စဖြစ်ကြတာပါ။
Psoriatic Arthritis (Psoriasis ကြောင့်အဆစ်ရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်ပါတို့ရှိနေပါက Psoriasis အဆစ်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။
Psoriasis ရှိနေခြင်းဟာ အဆစ်ရောင်ခြင်းအတွက် ကြီးမားတဲ့ အန္တရယ်တစ်ခုပါပဲ။ လက်သည်းတွေမှာ Psoriasis ဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့ ပိုကြောက်ရပါတယ်။
Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေမှာ ထိုရောဂါခံစားနေရတဲ့ မိဘတွေ၊ မောင်နှမသားချင်းတွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။
လူတိုင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း အသက်၃၀နဲ့ ၅၀ကြားလူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Psoriatic Arthritis (Psoriasis ကြောင့်အဆစ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ထိုရောဂါရှိနေမယ်လို့ သံသယရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး အောက်ပါအခြားစစ်ဆေးမှုအချို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းက Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းလား၊ အခြားအဆစ်ရောင်ခြင်းလားဆိုတာကို ခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။
MRI က ရေဒီယိုလှိုင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အားပြင်းတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေနဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ရှိတစ်ရှုးတွေကို အသေးစိတ် ပုံရိပ်ဖော်တဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းပညာဟာ ခြေဖဝါးနဲ့ ခါးတို့မှာရှိတဲ့ အရွတ်၊အကြောတွေရဲ့ ပြဿနာကို စစ်ဆေးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေးဖက်နာ Factor (RF)
RF ဟာ လေးဖက်နာမှာသာတွေ့ရတဲ့ သွေးထဲရှိ ပဋိပစ္စည်းဖြစ်ပြီး Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းမှာ များသောအားဖြင့် မတွေ့ရတတ်ပါဘူး။
ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ အဆစ်ကနေပြီး အပ်ဖြင့် အရည်အနည်းငယ် စုပ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဒူးဆစ်ပါ။ ထိုအရည်တွေထဲမှာ Uric acid ပုံဆောင်ခဲတွေ တွေ့မယ်ဆိုရင် Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲ ဂေါက်ရောဂါဖြစ်သွားပါပြီ။
Psoriatic Arthritis (Psoriasis ကြောင့်အဆစ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အဆစ်ရောင်ခြင်း၊နာခြင်းတွေသက်သာစေဖို့နဲ့ မသန်းမစွမ်းဖြစ်ခြင်းမှ ကွာကွယ်နိုင်စေဖို့သာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းကို ကုသတဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့ အောက်ပါတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဆေးဝါးတွေဟာ အနာသက်သာစေပြီး အရောင်ကျစေပါတယ်။
ရောဂါပုံစံပြောင်းလဲပေးသော လေးဖက်နာဆေးဝါးများ (DMARDs)
ထိုဆေးဝါးဟာ Psoriasisအဆစ်ရောင်ခြင်းကို နှေးကွေးစေပြီး အဆစ်တွေ၊ အခြားတစ်ရှုးတွေကို လုံဝပျက်စီးခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းမှာ ထိန်းချုပ်မရဖြစ်နေသော ကိုယ်ခံအားကို ဖိနှိပ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
တီအန်အက်အယ်ဖာဟာ ခန္ဓါကိုယ်ကထုတ်တဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းပါ။ ထိုဆေးဝါးဟာ ရောင်ရမ်းခြင်း၊နာကျင်ခြင်းတွေနဲ့ အဆစ်တောင့်တင်းခြင်းတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ထိုဆေးဝါးဟာ ရောင်ရမ်းခြင်းကို မြန်မြန်သက်သာစေပြီး တစ်ခါတစ်ရံ အဆစ်ထဲကို တိုက်ရိုက်ထိုးထည့်ပါတယ်။
Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသော အဆစ်ကို သတ္ထုနဲ့ ပလတ်စတစ်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အဆစ်တုဖြင့် အစားထိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Psoriasis အဆစ်ရောင်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ လူနေမှုဘဝပုံဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
အောက်ပါလူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက Psoriasis ကြောင့် အဆစ်ရောင်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
သင့်တင့်မျှတသော စားသောက်မှုပုံစံအားကျင့်သုံးပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။
အဝလွန်ခြင်းက အဆစ်ရောင်စေနိုင်ပြီး သွားလာလှုပ်ရှားရ ခက်ခဲစေပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင် စားသောက်မှုပုံစံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
ပျင်းရိလေးကန်စွာနေထိုင်နေခြင်းက ခန္ဓါကိုယ်ကို နှေးကွေးစေပြီး အဝလွန်ခြင်းနဲ့ အခြားရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ပြုလုပ်ဖို့ ဘယ်လိုကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေက သင့်တော်တယ်ဆိုတာကို ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်းနဲ့ ရေထဲမှာပြုလုပ်ရသော အားကစားတွေက အခြားသော အားကစားတွေထက် အဆစ်တွေပေါ်မှာ ပိုညင်သာပါတယ်။
လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေမယ်ဆိုရင် နေရထိုင်ရမသက်မသာဖြစ်စေပြီး၊ ဒဏ်ဖြစ်စေပါတယ်။
မေးစရာတွေရှိမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းလမ်းတွေကို ပိုမိုနားလည်သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
http://www.healthline.com/health/psoriatic-arthritis . Accessed February 7, 2017.
Psoriatic arthritis. http://www.webmd.com/arthritis/psoriatic-arthritis/psoriatic-arthritis#2 . Accessed February 7, 2017.
Psoriatic arthritis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psoriatic-arthritis/diagnosis-treatment/clinical-trials/rsc-20233951 . Accessed February 7, 2017.